Fahatongavan’i Papa Fransoa EPP 12 no handraisana ireo mpizaika
Rempotra tanteraka ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra ankehitriny.
Ankoatra ny fanomanan’izy ireo ny efitrano fianarana handraisana ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC manomboka amin’ny alatsinainy 09 septambra ho avy io mantsy dia miomana fatratra amin’ny fahatongavan’i Papa Fransoa ihany koa izy ireo izay higadona eto an-tanindrazana amin’ny zoma ho avy izao, ka anisan’ireny ny fandraisana ireo mpizaika. Ho an’Antananarivo Renivohitra manokana dia fantatra fa sekoly ambaratonga fototra miisa 12 no tsy maintsy karakaraina handraisana ireo mpizaika ireo. Tsy ampy izany amin’ny ankapobeny raha ny isan’ireo vahiny saingy noho ny fisian’ny fanadinana BEPC dia tsy nokasihina avokoa ireo sekoly ambaratonga faharoa rehetra. Tsiahivina fa 8 hetsy raha kely ireo olona hivahiny eto an-drenivohitra mandritra ny fahatongavan’i Papa Fransoa, fotoana iray hahafahan’ny rehetra mangataka tso-drano sy vavaka aminy ihany koa.